Indawo entle kakhulu kwi-villa
Country Park, Campania, Italy
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguClaudio
· Amagumbi okulala ayi-3
· Iibhedi eziyi-5
Iza kusetyenziswa nguwe yonke le iflethi okanye indlu ekwicomplex.
I-Apartment kwi-villa kumanqanaba amabini kwipaki yabucala kwaye ibekwe esweni iiyure ezingama-24 ngosuku ngabasebenzi abakhethekileyo. Kumgangatho ophantsi uya kufumana indawo yokuhlala enetafile yokutyela, indawo yokuphumla enesofa, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye negumbi eliluncedo elinomatshini wokuhlamba odibeneyo. Phezulu igumbi lokulala eliphindwe kabini elinegumbi lokuhamba langaphakathi, igumbi lokulala elineebhedi ezi-2 kunye newadilophu, indawo evulekileyo enebhedi ezi-2 ezingatshatanga kunye nebhedi yesofa ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Indawo yokupaka egciniweyo.
Ifulethi lonke litofotofo ngokugqithisileyo njengoko lixhotyiswe ngempompi yomoya kunye nempompo yobushushu kuwo onke amagumbi kwaye ligcwaliswe nazo zonke izixhobo eziyimfuneko, ezinjengomatshini wokuhlamba, umatshini wokuhlamba izitya, intsimbi, i-oven microwave, umatshini wekofu yeepods.
Iphepha le-1 kwayi-21 / 2
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2
Bonisa zonke 37 izinto onokuzisebenzisa
4.50 ·Izimvo eziyi-4
4.50 out of 5 stars from 4 reviews
4.50 · Izimvo eziyi-4
Indlu ibekwe epakini iikhilomitha ezimbalwa ukusuka esixekweni. Ungayonwabela inzolo njengoko kungekho ndlela zikufutshane. Kumgama weemitha ezimbalwa uya kufumana iipizza, iibar zepastry kunye neevenkile ezahlukeneyo. Ngaphakathi epakini kukho ivenkile enkulu yaseConad ekuvumela ukuba uthenge ngaphandle kokuthatha imoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Claudio
Ujoyine nge- 2019 Janyuwari
Ukuba akunjalo ngokobuqu kuya kuhlala kukho amanye amalungu osapho lwam aya kukwazi ukukukhapha ukuhlala kwakho, ekubonisa indlela yokuchitha iiholide zakho.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 15:00 - 19:00